၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှဒေတာများကိုမည်သို့ထုတ်ယူနိုင်သည်ကို Semalt Expert ကရှင်းပြသည်
ဝဘ်ဒေတာထုတ်ယူမှုဟုလည်းလူသိများသောဝက်ဘ်ဖျက်ခြင်းသည်အင်တာနက်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဝက်ဘ်ခြစ်ရာကိရိယာများသည် Hypertext Transfer Protocol ကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ပြီးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများစွာမှအချက်အလက်များကိုရယူရန်လွယ်ကူစေသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များမှသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်စုဆောင်းသိမ်းဆည်းလိုပါက၊ အောက်ပါ web scrap software ကိုသင်ကြိုးစားနိုင်သည်။
1. 80 ခြေထောက်
၎င်းသည်ဒေတာထုတ်ယူခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြေထောက် ၈၀ သည်အသုံးပြုသူလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအရအချက်အလက်များကိုပုံဖော်။ တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရယူပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ခြေထောက် ၈၀ သည် PayPal၊ MailChimp နှင့် Facebook တို့၏ရှေး ဦး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Spinn3r ဖြင့်အချက်အလက်များကို ရယူ၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုအဆင်ပြေစွာခြစ်ယူနိုင်သည်။ ဤကိရိယာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ သတင်းဆိုင်များ၊ RSS နှင့် ATOM feeds နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘလော့ဂ်များမှအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူသည်။ သင်သည်အချက်အလက်များကို JSON သို့မဟုတ် CSV ပုံစံများဖြင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Spinn3r သည်အချက်အလက်များကိုဘာသာစကား ၁၁၀ ကျော်ဖြင့်ခြစ်ပြီးသင်၏ဖိုင်များမှ spam များကို ဖယ်ရှားသည်။ ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုခြစ်နေစဉ် admin ရဲ့ console က bot တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
၎င်းသည် အချက်အလက်များကိုဖျက်ခြင်း အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Import.io သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကြောင့်ကျော်ကြားပြီးပရိုဂရမ်မာများနှင့်ပရိုဂရမ်မာမဟုတ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်ဝဘ်စာမျက်နှာများစွာမှအချက်အလက်များကိုခြစ်ပြီး CSV နှင့် JSON ပုံစံများသို့တင်ပို့သည်။ သင်သည်တစ်နာရီလျှင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ၂၀,၀၀၀ ကျော်ကိုခြစ်နိုင်ပြီး import.io သည် Windows, Linux နှင့် Mac အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုရယူရန်ရှာဖွေနေပါကသင်သည် Dexi.io ကိုစမ်းကြည့်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးအ ၀ င်ဆုံးသောအချက်အလက်ခြစ်များနှင့်တွားသွားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dexi.io ကို Cloud Scrape ဟုလည်းလူသိများပြီးတစ်မိနစ်လျှင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရာပေါင်းများစွာကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ browser အခြေပြုထုတ်ဝေမှုသည် crawlers ကိုတပ်ဆင်ပြီးအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရယူနိုင်သည်။ အချက်အလက်များကိုထုတ်ယူပြီးသည်နှင့်၎င်းကို Box.net သို့မဟုတ် Google Drive တွင်သိမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ hard drive သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်သည်။
ဤဘရောက်ဇာအခြေပြု application တည်ဆောက်ပုံနှင့်သင့်အချက်အလက်များကိုအဆင်ပြေစွာစုစည်းသည်။ Webhouse.io သည်၎င်း၏အချက်အလက်များတွယ်ကပ်နေသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စက်သင်ယူမှုနည်းပညာကြောင့်လူသိများသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့် API တစ်ခုတည်းရှိကွဲပြားခြားနားသောရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်အမြောက်အများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နာရီအတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ပြီးအရည်အသွေးအပေါ်အလျှော့မပေးပါ။ ဒေတာများကို XML၊ JSON နှင့် RSS ပုံစံများသို့တင်ပို့နိုင်သည်။
7. Visual ခြစ်
၎င်းသည်အသုံးဝင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်အချက်အလက်ထုတ်ယူသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြစ်သည်။ Visual Scraper ဖြင့်အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရယူနိုင်ပြီး JSON, SQL, CSV နှင့် XML ကဲ့သို့သောပုံစံများသို့တင်ပို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ point-and-interface နှင့်ကျော်ကြားပြီး PDF နှင့် JPG ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။